Njirimara Kachasị Mkpa nke Blog Corporate | Martech Zone
Njirimara Kachasị Mkpa nke Blog Corporate Blog
Wednesday, April 29, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'abalị a, enwere m ọ greatụ Confluence, ihe Indianapolis ịkparịta ụka n'eventntanet ihe omume, ebe anyị jikọtara otu ìgwè ikwu okwu na Mee na Emela nke Corporate Blogging. Sonyere m na ndị ọrụ ụlọ ọrụ ibe m Rhoda Israelov, Rodger Johnson, Kyle Nwachukwu na Kevin Hood.
Enwere obere esemokwu na nkwekọrịta maka iwu na njikwa nke ụlọ ọrụ blọọgụ, mana ekwenyere m na anyị niile kwenyesiri ike na ịde blọgụ, dị ka onye na-ajụ, na-aghọ atụmatụ dị oke mkpa (na ikekwe ịba uru karịa) karịa ụlọ ọrụ email. Ndị ahụ bụ okwu m - ọ bụghị ndị otu ahụ.
Onye ọbịa Erik Deckers mechie mkparịta ụka ahụ na ajụjụ:
Kedu otu ndụmọdụ ndụmọdụ dị mkpa onye ọ bụla kwesịrị icheta mgbe ịmalite blọọgụ ụlọ ọrụ ha?
Emechi panel ahụ, ekwenyere m na ndị ọzọ na ọ na-amalite site na nnukwu isiokwu nyocha, ọdịnaya dị egwu, ide banyere ndị ahịa gị, na ịkwụwa aka ọtọ na nghọta. Nzaghachi niile bụ ọnụego mbụ, yabụ ejiri m ohere mechie naanị ichetara onye ọ bụla na ọ dị mkpa ka anya, dị mfe ụzọ ịbanye na blog.
Enweghị m ike ịgwa gị oge ole m gara blọọgụ ma nwee mmasị izute onye na-ede blọgụ n'azụ ya, ma ọ bụ ọbụna ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ, mana ọ nweghị ihe doro anya na ibe na-atụ m aka n'ụzọ ziri ezi. Blog ọ bụla nwere azụmahịa kwesịrị inwe aha, ụdị kọntaktị, nọmba ekwentị, adreesị - yana obere oku ahaziri nke ọma iji mee ihe ga-enye gị ohere ịdebanye aha ma kpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ.
Enwere ụfọdụ ekwenyeghi mkparịta ụka na weebụ nke Google na-eburu na saịtị ndị depụtara adreesị ozi-e na saịtị ha. Site na Google ịtụkwasị obi ntụkwasị obi karia, ọ bụ ihe ezi uche dị na saịtị nwere ezigbo adreesị n'okporo ámá nwere ike ịtụkwasị obi karịa nke na-enweghị ya.
Tags: blogịde blọgụkpọọ ka ememgbanwectambido peeji nke
Tinye n'ọrụ Twitter maka Nnweta nnweta